Rabies and Common Questions - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
“ ခှေးရူးရောဂါနှငျ့အမေးမြားသောမေးခှနျးမြား “
ခှေးရူးနှငျ့ ခှေးကောငျး မညျသို့ ခှဲခွားနိုငျသနညျး?
ခှေးရူး ၂မြိုး ရှိပါသညျ။
၁။ ကွမျးတမျးသော ခှေးရူး၏ လက်ခဏာမြားမှာ
ခှေး၏ အနအေထိုငျ ပွောငျးလာခွငျး
တဈခုခုကို ဒေါသတကွီး ကိုကျနတေတျခွငျး
ခှေးကောငျးမြားက ခှေးရူးနောကျမှ လိုကျဟောငျတတျခွငျး
ပါးစပျတှငျ အမွှုပျတစီစီနှငျ့ သှားရညျ တမွားမွား ဖွဈနတေတျခွငျး
၂။ လဖွေတျ / အကွောခှေးရူး လက်ခဏာမြားမှာ
ကွှကျသားမြား လဖွေတျခွငျးကွောငျ့ ယိုငျတိယိုငျတိုငျ သှားနခွေငျး
အောကျမေးရိုး ပိတျမရပဲ သှားရတှေဲလောငျးကကြာ ပါးစပျအဟောငျးသားနှငျ့ သှားတတျခွငျး
တိတျဆိတျသော နရောမြားတှငျ ငွိမျငွိမျလေး အိပျနတေတျခွငျး
ခှေးကိုကျပွီး ဘယျနှဈရကျအကွာမှာ ခှေးရူးပွနျတတျသလဲ?
သတျသတျမှတျမှတျပွော၍ မရပါ။ ခှေးကိုကျသညျ့နရောနှငျ့ ဦးနှောကျ အကှာအဝေးပျေါ မူတညျ၍ မကျြနှာ၊ လညျပငျးတို့တှငျ အကိုကျခံရပါက ရောဂါပျေါခြိနျ မွနျပွီး ခွေ၊ လကျတို့၌ အကိုကျခံရပါက ရောဂါပျေါခြိနျ ကွာတတျပါသညျ။ ရောဂါဖွဈရနျ အစောဆုံး ၅ရကျမှ ၃လအတှငျး အဖွဈမြားပါသညျ။ အကွာဆုံး ၆နှဈအထိ ကွာတတျပါသညျ။
ခှေးကိုကျပွိး ဘယျအခြိနျအတှငျး ဆေးထိုးသငျ့သလဲ?
ခှေးကိုကျခံရတိုငျး ခှေးရူးကာကှယျဆေး ခကျြခငျြးထိုးသငျ့ပါသညျ။ စောနိုငျသမြှ စောထိုးပါက စိတျခရြပါသညျ။ ခကျြခငျြးမထိုးနိုငျလြှငျလညျး ထိုးနိုငျခြိနျတှငျ အမွနျဆုံးထိုးသငျ့သညျ တဈနညျးအားဖွငျ့ ခှေးရူးပွနျ လက်ခဏာ မပျေါသေးသမြှ ထိုးနိုငျပါသညျ။ ကုသရနျ ဆေးမရှိသညျ့အတှကျ လက်ခဏာပျေါမှ ဆေးထိုးပါက ဧကနျမုခြ သဆေုံးနိုငျပါသညျ။
ခှေးရူးပွနျရောဂါ မဖွဈအောငျ မညျသို့ ကာကှယျနိုငျပါသနညျး ?
ခှေးရူးပွနျရောဂါ ကာကှယျဆေးနှငျ့ ရောဂါပိုးအဆိပျဖွဆေေးဟူ၍ ၂မြိုးရှိပါသညျ။ ခှေးရူးကာကှယျဆေးကို ထိုးသငျ့သူမြားမှာ
တိရစ်ဆာနျမှေးမွူရေးခွံမြားတှငျ တိရစ်ဆာနျမြားနှငျ့ထိတှေ့ အလုပျလုပျနရေသူမြား
ခှေးရူးရောဂါ ဖွဈပှားနသေူကို အနီးကပျစောငျ့ရှောကျနသေူမြား စသညျတို့ဖွဈကွပါသညျ။
ရောဂါကာကှယျဆေး ကွိုတငျ ထိုးလိုသူမြားသညျ ဆေးစထိုးသညျ့ နတှေ့ငျ ၁ လုံး၊ ၇ ရကျအကွာတှငျ ၁လုံး၊ ၂၁ရကျအကွာတှငျ ၁လုံး၊ စုစုပေါငျး ၃လုံးထိုးရနျ လိုအပျပါသညျ။ ခှေးကိုကျခံရပါက စောနိုငျသမြှစောစော ကာကှယျဆေးထိုးထားသငျ့ပါသညျ။ အရငျ ကာကှယျဆေး မထိုးသူမြားသညျ ဝ၊ ၇၊ ၂၁ရကျအတိုငျး အနညျးဆုံး ၃ကွိမျထိုးရနျလိုအပျပါသညျ။ ပထမရကျတှငျ ဆေး၂လုံးထိုးရမညျ ဖွဈ၍ စုစုပေါငျး ကာကှယျဆေး ၄လုံး ထိုးရပါမညျ။
ကာကှယျဆေးထိုးဖူးသူဖွဈပါက အကိုကျခံရသညျ့နတှေ့ငျ ၁ကွိမျ၊ ၃ ရကျအကွာတှငျ ၁ကွိမျ၊ စုစုပေါငျး ၂လုံး ထပျမံဖွညျ့ထိုးရပါမညျ။
တိရစ်ဆာနျအကိုကျခံရသူမြားသညျ ဒဏျရာအရှယျအစား၊ ကိုကျသညျ့ တိရစ်ဆာနျပျေါ မူတညျ၍ ကာကှယျဆေးထိုးရုံမကဘဲ အဆိပျဖွဆေေးကိုလညျးထိုးရနိုငျပါသညျ။ထို့အပွငျ မေးခိုငျရောဂါကာကှယျဆေးကိုပါ ထိုးသငျ့ပါသညျ။
ခှေးရူးပွနျရောဂါ လက်ခဏာမြားပွပါက ပြောကျကငျးအောငျကုသရနျ ခဲယဉျးပါသညျ။
ရောဂါလက်ခဏာမြား သကျသာစရေနျသာ ပွုလုပျနိုငျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ခှေးရူးပွနျရောဂါသညျ ကုသရနျထကျ ကာကှယျခွငျးသညျသာ အဓိကဖွဈပါသညျ။
အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျမြားကို ကာကှယျဆေးထိုးပေးခွငျး
ခှေးရူးပွနျရောဂါဖွဈနသေော သို့ သံသယဖွဈဖှယျရှိသော တိရစ်ဆာနျမြားကို ထိနျးသိမျးထားခွငျး
အခွားနရောမှသှငျးလာသော တိရစ်ဆာနျမြားကို သီးခွားထား၍ စောငျ့ကွညျ့ခွငျး
အကိုကျမခံရအောငျ ဂရုစိုကျခွငျးဖွငျ့ ရောဂါကိုကာကှယျနိုငျပါသညျ။
ထို့ပွငျ တိရစ်ဆာနျအကိုကျခံရပါလညျး နီးစပျရာဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးမြားတှငျ ခှေးရူးပွနျကာကှယျဆေး ထိုးထားသငျ့ပါသညျ။
ရီခြို (ဆေး ၁)
“ ခွေးရူးရောဂါနှင့်အမေးများသောမေးခွန်းများ “
ခွေးရူးနှင့် ခွေးကောင်း မည်သို့ ခွဲခြားနိုင်သနည်း?
ခွေးရူး ၂မျိုး ရှိပါသည်။
၁။ ကြမ်းတမ်းသော ခွေးရူး၏ လက္ခဏာများမှာ
ခွေး၏ အနေအထိုင် ပြောင်းလာခြင်း
အကြောင်းမဲ့ပြေးလွှားနေခြင်း
တစ်ခုခုကို ဒေါသတကြီး ကိုက်နေတတ်ခြင်း
ခွေးကောင်းများက ခွေးရူးနောက်မှ လိုက်ဟောင်တတ်ခြင်း
ပါးစပ်တွင် အမြှုပ်တစီစီနှင့် သွားရည် တမြားမြား ဖြစ်နေတတ်ခြင်း
၂။ လေဖြတ် / အကြောခွေးရူး လက္ခဏာများမှာ
ကြွက်သားများ လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် ယိုင်တိယိုင်တိုင် သွားနေခြင်း
အောက်မေးရိုး ပိတ်မရပဲ သွားရေတွဲလောင်းကျကာ ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် သွားတတ်ခြင်း
တိတ်ဆိတ်သော နေရာများတွင် ငြိမ်ငြိမ်လေး အိပ်နေတတ်ခြင်း
ခွေးကိုက်ပြီး ဘယ်နှစ်ရက်အကြာမှာ ခွေးရူးပြန်တတ်သလဲ?
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြော၍ မရပါ။ ခွေးကိုက်သည့်နေရာနှင့် ဦးနှောက် အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ မျက်နှာ၊ လည်ပင်းတို့တွင် အကိုက်ခံရပါက ရောဂါပေါ်ချိန် မြန်ပြီး ခြေ၊ လက်တို့၌ အကိုက်ခံရပါက ရောဂါပေါ်ချိန် ကြာတတ်ပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ရန် အစောဆုံး ၅ရက်မှ ၃လအတွင်း အဖြစ်များပါသည်။ အကြာဆုံး ၆နှစ်အထိ ကြာတတ်ပါသည်။
ခွေးကိုက်ပြိး ဘယ်အချိန်အတွင်း ဆေးထိုးသင့်သလဲ?
ခွေးကိုက်ခံရတိုင်း ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး ချက်ချင်းထိုးသင့်ပါသည်။ စောနိုင်သမျှ စောထိုးပါက စိတ်ချရပါသည်။ ချက်ချင်းမထိုးနိုင်လျှင်လည်း ထိုးနိုင်ချိန်တွင် အမြန်ဆုံးထိုးသင့်သည် တစ်နည်းအားဖြင့် ခွေးရူးပြန် လက္ခဏာ မပေါ်သေးသမျှ ထိုးနိုင်ပါသည်။ ကုသရန် ဆေးမရှိသည့်အတွက် လက္ခဏာပေါ်မှ ဆေးထိုးပါက ဧကန်မုချ သေဆုံးနိုင်ပါသည်။
ခွေးရူးပြန်ရောဂါ မဖြစ်အောင် မည်သို့ ကာကွယ်နိုင်ပါသနည်း ?
ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးနှင့် ရောဂါပိုးအဆိပ်ဖြေဆေးဟူ၍ ၂မျိုးရှိပါသည်။ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးကို ထိုးသင့်သူများမှာ
တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံများတွင် တိရစ္ဆာန်များနှင့်ထိတွေ့ အလုပ်လုပ်နေရသူများ
ခွေးရူးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသူကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက်နေသူများ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ရောဂါကာကွယ်ဆေး ကြိုတင် ထိုးလိုသူများသည် ဆေးစထိုးသည့် နေ့တွင် ၁ လုံး၊ ၇ ရက်အကြာတွင် ၁လုံး၊ ၂၁ရက်အကြာတွင် ၁လုံး၊ စုစုပေါင်း ၃လုံးထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခွေးကိုက်ခံရပါက စောနိုင်သမျှစောစော ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသင့်ပါသည်။ အရင် ကာကွယ်ဆေး မထိုးသူများသည် ၀၊ ၇၊ ၂၁ရက်အတိုင်း အနည်းဆုံး ၃ကြိမ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပထမရက်တွင် ဆေး၂လုံးထိုးရမည် ဖြစ်၍ စုစုပေါင်း ကာကွယ်ဆေး ၄လုံး ထိုးရပါမည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူးသူဖြစ်ပါက အကိုက်ခံရသည့်နေ့တွင် ၁ကြိမ်၊ ၃ ရက်အကြာတွင် ၁ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၂လုံး ထပ်မံဖြည့်ထိုးရပါမည်။
တိရစ္ဆာန်အကိုက်ခံရသူများသည် ဒဏ်ရာအရွယ်အစား၊ ကိုက်သည့် တိရစ္ဆာန်ပေါ် မူတည်၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးရုံမကဘဲ အဆိပ်ဖြေဆေးကိုလည်းထိုးရနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုပါ ထိုးသင့်ပါသည်။
ခွေးရူးပြန်ရောဂါ လက္ခဏာများပြပါက ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရန် ခဲယဉ်းပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန်သာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါသည် ကုသရန်ထက် ကာကွယ်ခြင်းသည်သာ အဓိကဖြစ်ပါသည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း
ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်နေသော သို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော တိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း
အခြားနေရာမှသွင်းလာသော တိရစ္ဆာန်များကို သီးခြားထား၍ စောင့်ကြည့်ခြင်း
အကိုက်မခံရအောင် ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် တိရစ္ဆာန်အကိုက်ခံရပါလည်း နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသင့်ပါသည်။
How to refill your energy after making love